Calaamadaha Kobcinta Canopy-ga waxay ku kacayaan $ 345 Milyan si loogu Iibsado Xashiishadda Sare • Dawooyinka Inc.eu
Kobaca Canopy wuxuu saxeexay heshiis $ 345 milyan ah si loo iibsado Cannabis Sare
Kobcinta Canopy Corp. saxiixay heshiis si loo helo Shirkadda Cannabis ee Sare Inc. heshiis ku kacaya $ 345 milyan oo doolarka Mareykanka ah, ama qiyaastii € 365 milyan.
1 Ku saabsan Kobaca Koritaanka Corp.
2 Ku saabsan Xashiishadda Sare
Xawaaladda ayaa la filayaa inay u keento faa'iidooyin dhowr ah saamileyda Canopy iyo Sare Cannabis. Gaar ahaan marka la dhammeeyo helitaanka, Canopy wuxuu yeelan doonaa faylalka calaamadaha oo la xoojiyay, oo ay ku jiraan mid ka mid ah noocyada ugu sarreeya ee Kanada, 7ACRES iyo 7ACRES Farshaxanka Wadajirka ah - sidoo kale soo sheeg bogga internetka ee Kobcinta Awoodda. Kobaca calaamadda waxaa laga filayaa qaybinta ay taageerto Canopy's iibka adag iyo shabakadda qaybinta, iyo sidoo kale fikradaha macaamiisha ka sarreeya iyo awoodaha R&D. Marka lagu daro helitaanka khidmadaha suuqyada, Saamilayda Cannabis ee Sare waxay sidoo kale ka faa'iideysan doonaan Canopy-ka Mareykanka CBDnashaadaadka iyo meeleynta joogtada ah ee sii wadista soo-gaadhista ballaadhinta suuqa Mareykanka. Qiime dheeri ah ayaa laga heli doonaa iyada oo loo marayo xarunta wax soo saarka ee Kincardine, Ontario, oo leh rikoodh la xaqiijiyay oo ah soo saarista ubaxyo qiimo jaban.
Heshiiska ayaa ah talaabadii ugu dambeysay ee Canopy ee kobcinta iyada oo loo marayo iibsashada maaddaama warshadaha xashiishka ay soo mareen mowjado isku-dhaf ah. Canopy ayaa usbuucii la soo dhaafay ku dhawaaqday inay iibsatay Ace Valley, oo ah shirkad Toronto ah oo sameysa faleebo, gummies iyo pre-rolls.
"Marka aan sii wadno balaarinta faylalka ay kujiraan magacyada hogaaminaya, waxaan ku faraxsanahay inaan macaamiil dheeri ah ku gaarno astaamaha qiimaha sare leh ee wax soo saarka sare iyo badeecadaha heer sare, anagoo sii adkeynayna hogaaminta suuqa Canopy," ayuu yiri David Klein, Madaxa Sare ee Canopy. Go'aanka ugu sarreeya ee Sare ee hiddaha, taranka sare iyo xakamaynta tayada adag, oo ay weheliso fikradaha macaamiisha ee hormuudka ka ah warshadaha Canopy, hormarinta R & D iyo hal-abuurnimada, waxaa laga filayaa inay abuurto isku-dhaf xoog leh oo la jaan qaadaya istiraatiijiyadeena istiraatiijiyadeed si kor loogu qaado kobaca alaabada tayada sare leh. qaybaha ugu waaweyn. “
Saamileyaasha ugu sarreeya ee Cannabis waxay heli doonaan CAD 0,01165872 oo ah hal kayd wadaag ah Canopy iyo CAD 0,01 oo lacag caddaan ah saamiga ugu sarreeya ee Cannabis ee la hayo. Bixinta waxay u dhigantaa CAD 44 senti halkii share ee Cannabis Sare.
"Macaamilkan wuxuu markhaati u yahay qiimaha ay abuureen dhamaan kooxaha Sare wuxuuna ka faa'iideysan doonaa dhammaan daneeyayaashayada," ayay tiri Beena Goldenberg, Madaxweynaha iyo Agaasimaha Guud ee Cannabis Sare. “Waxaan awoodnay inaan soo qaadno alaabooyin waaweyn oo ku guuleystey daacadnimo macaamiil oo xoog leh kuna shaqeeya heer wax-ku-ool ah oo hoggaamineed warshadeed. Waxaan sidoo kale dhignay sumcad aad u sareysa oo la raadinayo 7ACRES. Isku darka Cannabis Sare ee leh Canopy - oo ah hoggaamiye suuq Canadian ah oo la socda Mareykanka - wuxuu labada shirkadoodba siiyaa fursad weyn oo ay ku abuuraan qiime. Waxaan rajeyneynaa inaan la shaqeyno Canopy si aan u dhameystirno macaamilkan. “
Kobaca Canopy wuxuu Saxeexay $ 345 Milyan oo Doollar si loo iibsado Cannabis Sare (afb.)
Ku saabsan Kobaca Koritaanka Corp.
Kobaca Canopy (TSX: WEED, NASDAQ: CGC) waa xashiishad dunidu ku hogaamiso noocyo kala duwan iyo cannabinoids loogu talagalay alaabada macaamiisha, oo ay horseed u tahay hammi ah in la hagaajiyo nolosha, joojiyo mamnuuca iyo xoojinta bulshada iyadoo la siidaayo awooda buuxda ee xashiishadda. Ka faaideysiga fikradaha macaamiisha iyo hal-abuurnimada, waxaan ku siineynaa noocyo wax soo saar leh ubaxyo tayo sare leh oo la qalajiyey, saliid, kaabsool jilicsan, cabitaanno la isku daray, qaabab la cuni karo iyo mowduuc, iyo sidoo kale uumiga ka yimaada Kobaca Canopy iyo hogaamiyaha warshadaha Storz & Bickel.
Calaamadeena caafimaad ee caalamiga ah, Spectrum Therapeutics, waxay suuq geynaysaa noocyo kala duwan oo noocyo kala duwan ah iyada oo la adeegsanayo nidaamka kala soocida midabbada midabbada leh waana hogaamiyaha suuqa ee Kanada iyo Jarmalka labadaba. Iyada oo loo marayo boodhadhkayaga abaalmarinta ah ee Tweed iyo Tokyo Smoke, waxaan ku gaarnay macaamiisheena qaangaarka ah waxaanan dhisnay kuwa raacsan oo daacad ah adoo diirada saaraya alaabada tayada sare leh iyo xiriirka macaamiisha macnaha leh Kobcinta Canopy waxay gashay suuqa caafimaadka iyo fayoqabka macaamiisha ee suuqyada muhiimka ah oo ay kujiraan Kanada, Mareykanka iyo Yurub iyadoo loo marayo nafaqada isboortiga ee BioSteel iyo xalalka maqaarka iyo hurdada ee tan; oo waxay soo bandhigtay alaabooyin dheeri ah oo loo oggol yahay CBD in Mareykanka dhexdeeda ah iyada oo loo marayo noocyadayada 'First & Free' iyo Martha Stewart CBD. Kobaca Canopy wuxuu leeyahay iskaashi la aasaasay Fortune 500 oo ah hogaamiye ku saleysan aalkolo Constellation Brands.
Ku saabsan Xashiishadda Sare
Shirkadda Cannabis ee Sare, Inc., (TSX: DAB) (OTCQX: SPRWF) (FRA: 53S1), waa shirkad caalami ah oo ka kooban shirkado kala duwan oo xashiishad ah, wax soo saar iyo noocyo kala duwan ah. Laga soo bilaabo 2014, shirkaddu waxay u koray mid ka mid ah soo saarayaasha adduunka ee soo saara madadaalada madadaalada, jumlada iyo dawooyinka xashiishadda.
Xayeysiiska sumadda ee Xashiishadda Sare waxay u adeegtaa macaamiisha kala duwan iyo waaya-aragnimada bukaanka, oo leh noocyo iyo alaabooyin ka hadlaya doorbidida madadaalada, fayoobaanta, caafimaadka iyo macaamiisha cusub. Xayeysiiska shirkadda ee noocyada madadaalada waxaa ka mid ah 7ACRES, 7ACRES Farshaxan Wadajir ah, Blissco, sonkor iyo Hiway. Cannabis-ka ugu sarreeya wuxuu wax ka qabtaa fursadaha cannabis ee caafimaadka qaranka iyo kuwa caalamiga ah iyada oo loo marayo astaanta 'Truverra brand'.
Noocyada ugu sarreeya ee Cannabis waxaa taageeray kooxo heer caalami ah oo diiradda saaraya howlaha muhiimka ah ee silsiladda qiimaha, oo ay ku jiraan beerashada miisaanka leh, farsamaynta qiimaha lagu daro, baakadaha otomaatiga ah iyo baaritaanka wax soo saarka iyo R&D
Ilaha waxaa ka mid ah Bloomberg (EN), Magaalada News (EN), PRNewsWire (EN), TheGrowthOp (EN)
saamiyadaAmericaCanadacannabiskaydka xashiishkamaaliyad ahaanLa wareegidaMaraykanka
Horumarinta dhirta iyo habdhaqanka ee GreenTech Amsterdam
Xaqiiqda ah in Nederland loo yaqaan adduunka oo dhan dadkeeda cilmiga beeraha iyo waraabka ma aha wax cusub. In tikniyoolajiyad isku mid ah ...
Ra'yiururin cusub ayaa muujineysa taageerada sii kordheysa ee xashiishadda sharciga ah ee Boqortooyada Midowday
In kasta oo dowladda UK ay dhowr jeer ku celcelisay inaysan damacsanayn inay…
Erasmus MC wuxuu baarayaa saamaynta xashiishku ku leeyahay kansarka
Wax yar baa laga ogyahay saamaynta xashiishku ku leeyahay burooyinka. Halkaas ayaan horey ugu qornay ...